15 лет "Костромскому картофелю". В планах - новые задачи - Журнал "Картофельная Система"
Ugu weyn Gobol
15 sano oo ah "baradhada Kostroma". Qorshayaal - hawlo cusub
LLC "Kostroma Baradho" waa mid ka mid ah beeraha baradhada abuurka ugu weyn ee gobolka Kostroma. Sannadkan shirkaddu waxay jirsaneysaa 15 sano. Waxaan kala hadleynaa agaasimaheeda, Alexander Pilipchuk, natiijooyinka aan ka gaarnay waqtigan iyo sida baradhada Kostromskoy maanta u nooshahay.
- Alexander Alekseevich, wax yar nooga sheeg taariikhda dhaqaalaha.
- Shirkadda waxaa la aasaasay 2005. Markii hore, waxay u adeegtay sidii goob tijaabo iyo wax soo saar loogu talagalay taranka noocyada shirkadda Jarmalka ee Norika. Gobolka Kostroma wuxuu ku habboonaa abuuritaanka abuur abuur sida mid ka mid ah gobollada ugu wanaagsan marka loo eego xaaladaha dabiiciga iyo cimilada iyo xaaladaha caafimaad ee jirka. Wax soosaarka waxaa loo abaabulay iyadoo ay ka qeyb qaadanayaan la taliyayaal reer Yurub ah, iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyada ugu casrisan uguna casrisan Tani waa sida dufcaddii ugu horreysay ee Ruushka ah ee baradhada iniinyaha ee noocyada Gala iyo Vega lagu beeray beeraha Kostroma.
Marxaladi hore, shaqada waxaa lagu qabtay kaliya 50 hektar. Baradhadu ee dhalmo wacan ayaa lagu koray bartan. Hadda beertu waxay sidoo kale ku hawlan tahay soo saarida abuur asal ah, waxaan la shaqeynaa minicubers. Shirkadda ayaa horay u qoondeysay 350 hektar oo midho soo saar baradho ah.
- Sida iska cad, badeecadaha shirkaddu suuq bay ku yihiin baahi?
- Waxaan soo saareynaa badeecad tayo sare leh, tan waxaa lagu xaqiijin karaa xaqiiqda ah in maanta beertu si joogto ah ulashaqeyso macaamiil aad u baahan: waxaan u beereynaa baradhada Lam Weston Belaya Dacha LLC, HZ PSC Sadokas JSC, Stet Rus LLC ".
Intaa waxaa u dheer, beerta ruqsad u leh waxay soo saartaa baradhada taranka ee Norika. Goob kasta oo wax soo saar ah waxay leedahay qalab qalab casri ah u gaar ah. Dhammaan abuur fara badan oo la helay ayaa la tijaabiyay oo laga baaray fayraska iyo bakteeriyada ku jirta sheybaarada la aqoonsan yahay.
- Labadii sano ee la soo dhaafey waa lagu guuleystey beeraleyda baradhada Kostroma (marka la eego xaaladaha cimilada), dalagyo aad u wanaagsan ayaa la helay.
Ma ku raacsan tahay fikradan?
- Runtii maahan. Sannaduhu ma sahlaneyn, sidii had iyo jeer looga beeri jiray beeraha. Waxaa jiray dhibaatooyin ay ahayd in la xaliyo, oo aan rajo laga qabin nasiib. Laakiin waa la ogaan karaa in khubaradeennu ay ku dhammaystireen dhammaan noocyada kala duwan ee tallaabooyinka cilmiga beeraha xilligii loogu talagalay, cimiladu kuma dhicin heer kasta oo muhiim ah, natiijaduna way dhaaftay wixii laga filaayay: celceliska waxsoosaarka ee 2019 wuxuu ahaa heerka 50 t / ha.
- Ma jiraan khubaro ku filan beerta?
- Nasiib darrose, arrinta shaqaaluhu annaga ayey khusaysaa. Waxaan marwalba diyaar u nahay inaan aqbalno xirfadlayaal karti leh (cilmiga beeraha ee meesha ugu horeysa) kooxdeena kuwaas oo diyaar u ah inay si buuxda ula shaqeeyaan dhulka.
Waxa jira dhibaatooyin qaarkood oo ah xulashada shaqaalaha xilliyeed, laakiin dhibaatadan ku jirta beeraha casriga ah waxaa lagu xalliyaa is-waafajinta hannaanka shaqo ee badan. Sidaa darteed, kaliya ma yaraynayno ku tiirsanaanta shaqaalaha buugaagta ee aan xirfad lahayn, laakiin waxaan sidoo kale kordhinaynaa wax soo saarka iyo xasilloonida tayada.
Shirkaddu waxay leedahay dhowr nooc oo baradho ah, kuwaas oo bixiya fursadda lagu keydiyo tayo tayo leh oo farcan abuur ah. Intii lagu gudajiray 2017, waxaan u xilsaarnay bakhaar nooc cusub oo baradho ah oo leh awood dhan 2,5 kun oo tan, oo ku qalabeysan nidaamyada xakamaynta cimilada otomatiga. Waxaan qorsheyneynaa inaan dhisno xarun kale oo keyd ah oo ku qalabeysan cutubyada qaboojiyaha sidaa darteed ay u suurta gasho inay ku keydiso walxaha abuurka muddo dheer.
- Maxaa kale oo aad ugu sheegi kartaa akhristayaasha majaladda qorshooyinka dhaqaalaha mustaqbalka dhow?
- Hawlaha mudnaanta leh ee aan nafteenna u dejinnay waa inaan kordhinno soo-saarka miraha fasalka PP-1 iyo SSE; ballaarinta khadka kala duwan (soo bandhigida noocyo cusub oo baradho ah oo baahi looga qabo suuqa). Waxaan dadaallada oo dhan ugu jiheynaa xalkooda.
Tags: 2020 .1Kostroma
Beeraha baradhada ee gobolka Kostroma
Baakadaha baradho. Isbeddelku waa dhowyahay
Baradhada baradhada ee gobolka Kostroma
Ku saabsan soosaarka alaabada dabiiciga ah
Xalka alaabooyinka dhirta lagu ilaaliyo ee dhibaatooyinka dhabta ah iyo rajada dalabka
"Baradho 2020." Fikradaha iyo natiijooyinka